प्रधानमन्त्री ओलीको गीत रेकर्डिङ हुँदै - satkar post
प्रधानमन्त्री ओलीको गीत रेकर्डिङ हुँदै
काठमाडौं, ३० वैशाख : १ मे (१९ वैशाख) अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस दिन । रचनाकार तथा गायक शिशिर योगीको फेसबुकमा एकाबिहानै नोटिफिकेसन आयो । सांसद भगवती न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा रचित कविता ट्याग गरेकी थिइन् । र, पढेर प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेकी थिइन् । कविताको शीर्षक थियो, ‘अब आँशु खसाउनु पर्दैन’ ।
अब आँशु खसाउनु पर्दैन
आहा ! कति भाग्यमानी ।
यस कवितामा प्रधानमन्त्री ओलीले जन्मभूमिप्रतिको उत्तरदायित्व र कर्तव्य उल्लेख गरेको योगी बताउँछन् । उनको बुझाइमा आफूलाई परेका दुःख सहेर पनि संकल्पको बाटोेबाट विचलित नहुने भाव यस कवितामा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् । ‘यस कवितामा पनि संगीत भर्ने काम लगभग सकिएको छ,’ योगी भन्छन्, ‘लकडाउनका कारण स्टुडियो बन्द छन् । सबै स्थिति सामान्य हुने बित्तिकै रेकर्डिङमा जान्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणलगत्तै र कोरोना भाइरस फैलिन नदिन लकडाउन लागू गरिएयता रचना गरेका दुई कविता गीतका रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
नेपाली माटो, चेतना र खबरदारीका गीत रचना गर्नु योगीको पनि विशेषता हो । हालै योगीले सीमानाको विवादलाई लिएर आफ्नो गीत पनि रिलिज गरेका छन्– ‘हेर सीमाना हाम्रो पराइले सुटुक्क चोरेको’ । भिडियो छायांकन गर्न अहिले सम्भव नभएकाले ‘फोटो फिचर’मा उक्त गीत युट्युबमा अपलोड गरिएको छ ।
यसअघि लिपुलेकको विवाद हुँदा नै योगीले तयार पारेका थिए यो गीत । धीरजनाथ योगीको संगीत रहेको गीतमा शिशिरकै स्वर छ । राष्ट्रियताका सन्दर्भमा संगीतले शालिन भूमिका वहन गर्ने उनी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष संवादमा विकृति, विसंगतिबारे कत्तिको कुरा हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले अत्यन्तै सकारात्मक कुरा गर्ने उनी बताउँछन् ।
‘राम्रो काम गर्न खोज्दा आफ्नै परिवारबाट पनि बाधा आउँछ, कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ शिशिर जी’ भनेर गुनासो गरेको उनी सम्झिन्छन् । भन्छन्, ‘यो सबै सुन्दा साँच्चै घेराबन्दीमै पो हुनुहुन्छ कि भन्ने आभाष हुन्छ ।’ यो सामग्री नयाँ पत्रिकाले तयार पारेको हो ।
प्रधानमन्त्री आजै सिंगापुर प्रास्थानः उपचारसँगै केही समय आराम गर्ने प्रधानमन्त्री उपचारका लागि डेढ साता सिंगापुर बस्ने प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भ’र्ना वेलायतका प्रधानमन्त्री भनेर अरूलाई नै बधाई दिएपछि प्रधानमन्त्रीकाे विल्ला प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सु’धार प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौलामा खराबी प्रधानमन्त्री ओलीको तेस्रोपटक हेमोडा’यलाइसिस प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार अमेरिकामा हुने नेकपा सचिवालय बै’ठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यबारे छ’लफल नेपाल गुटलाई ‘पाखा’ लगाएरै अघि बढ्ने ओलीको तयारी
पहिलाेपटक संखुवासभामा दुईजनामा कोरोना संक्रमण